"Jaona Mpanao batisa, nitory … nanao hoe : Mibebaha ianareo; fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra."Matio 3:1,2
"Nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra."Matio 4:17
Teny mitovy toy izany no nanombohan’i Jaona Mpanao Batisa sy Jesosy ny toritenin’izy ireo. Inona no anton’io baiko hentitra iantsoana ny olona hibebaka io? Satria izany no fiantombohan’ny Filazantsara, sady «lalana tsy maintsy aleha».
Inona no hevitry ny hoe “mibebaka”? Amin’ny ankapobeny, io matoanteny io dia ilazana ny nenina noho ny ratsy natao, omban’ny faniriana hanonitra sy tsy hamerina izany intsony. Nefa tsy feno izany famaritana izany.
Ao amin’ny teny grika fototra, io voambolana io dia midika ara-bakiteny hoe «fiovana toe-tsaina». Tsy fanenenana ny lasa fotsiny ihany, fa fiovana ifotony eo amin’ny fomba fijery, dia ny fijery an’Andriamanitra sy ny fijery ny tena.
Koa ny fibebahana dia tsy nenina sendra mandalo sy fitserana ny tena, fa voalohany indrindra, fiovam-po, fiverenana ilalana, fijery vaovao ny fiainantsika, fijery miorina amin’ny fahitan’Andriamanitra azy. Fialana tsy hanaraka ny sitrapon’ny tena, fa mitodika amin’Ilay Andriamanitra velona Izay naneho ny tenany ao amin’ny Teniny. Fialana “amin’ny maizina ho amin’ny mazava, ary amin’ny fahefan’i Satana ho amin’Andriamanitra” (Asan’ny Apostoly 26:18). Rehefa manazava ny fiainantsika ny fitiavan’i Kristy, vao manomboka mahatakatra ny fahotantsika isika sy miala amin’izany. Satria ny hoe mibebaka dia miombon-kevitra amin’Andriamanitra momba ny ota -ireo fahotako manokana-, mba hiaikeko izany aminy sy handaozako azy ireny.